မြန်မာတွေ အမြင်ကျယ်သင့်ပြီ - Thadin
December 17, 2018 Admin Kwee အားကစားကဏ္ဍ Comments Off on မြန်မာတွေ အမြင်ကျယ်သင့်ပြီ
Courtesy * YanNaung Soe *
အစဉ် ကျန်းမာချင်ပါသလား။ ဒီနေ့ ပဲ စပြီး ဒီအချက်တွေ လိုက်နာလိုက်ပါ။ အစဉ်ကျန်းမာဖို့ သိထားသင့်သော အချိန်များ…!
၁ ပြည်လျော့ တင်းတောင်းနဲ့ ဆန်ရောင်း၊ မြေခိုးပြီး သစ်ပင်စိုက်တဲ့ တောင်ဥက္ကလာပ က လူချမ်းသာ မိသားစုရဲ့ အကုသိုလ် အကျိုးပေးပုံ ကြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ…!
This Month : 38310
This Year : 233708
Total Users : 592732
Views Today : 2889
Total views : 2720029